होशे, योएल, आमोस, ओबदियाह – Word of Truth, Nepal
होशे, योएल, आमोस, ओबदियाह
नियमका पुस्तकहरू अध्ययन पाठ्यक्रम यात्राको हामी लगभग अन्तिम भागतिर छौं। एक दर्जन पुस्तकहरू मात्र बाँकी रहेका छन्। ती १२ पुस्तकहरूमा कुनै पनि धेरै लामो छैनन्। ती पुस्तकहरूलाई “लघु अगमवक्ताका पुस्तकहरू” भनिन्छन् किनभने लम्बाईको आधारमा तिनीहरू छोटा छन्, तर हामीले अध्याय ९ मा सिकेझैं, हरेक लघु अगमवक्ताका सन्देशहरू बृहत महत्त्वका छन्! यस अध्यायले यी चार पुस्तकहरूमा पाइने मूख्य सन्देशको बारेमा बताउनेछ, र अध्याय १२ र १३ले बाँकी आठ लघु अगमवक्ताका पुस्कतहरूमा पाइने मूख्य सन्देशको बारेमा बताउनेछ।
होशे-परमेश्वरको अचुक प्रेम!
यहूदाका राजाहरू, उज्जियाह, योताम, आहाज र ____________ राजाका शासनकाला दिनहरूमा होशे परमेश्वरको अगमवक्ता थिए (होशे १:१)। त्यस समयमा योआश (यहोआश)का छोरा यारोबाम इस्राएल (उत्तरी राज्य)का राजा थिए। के यी राजाहरूलाई अध्याय ५ को चार्टमा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? टिप्पणी: होशे १:१मा उल्लख गरिएको यारोबाम भनेको यारोबाम दोस्रो हुन्।
होशे यशैयाको समयमा नै जिएका थिए (यशैया १:१मा उल्लेख गरिएका राजाहरू पढ्नुहोस्)। यशैयाको सेवकाई यहूदाको दक्षिणी राज्यको निम्ति थियो तर होशेको सेवकाई इस्राएलको उत्तरी राज्यको निम्ति थियो। होशेको पुस्तकमा एफ्रैम नाम ३६ पटक उल्लेख गरिएको पाइन्छ (होशे ५ अध्याय हेर्नुहोस्)। यो नाम इस्राएलको उत्तरी राज्यलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो। हेशेको सन्देश इस्राएलको उत्तरी राज्यको निम्ति थियो, जसलाई एफ्रैम पनि भनिन्छ।
उनको सन्देश हेर्न, उनकै जीवनलाई हेर!
आफ्नै जीवन शैलीद्वारा होशेले उनको सन्देशलाई नाटकीय रुप दिए। परमेश्वरले इस्राएलको राज्यलाई एउटा अति महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउन चाहनुभयो र यसो गर्नको निम्ति उहाँले होशेको विवाहलाई प्रयोग गर्नुभयो! होशेले यस्तो स्त्रीसँग विवाह गरे जो उनको लागि अविश्वासयोग्य ठहरिने थिई, र तिनीबाट तर्किएर अरू प्रेमीहरूकहाँ जानेथिई (होशे १:२)। परमेश्वरले यो वैवाहिक बिछोडलाई उहाँको अगमवक्ता होशेको जीवनमा इस्राएल राष्ट्रलाई एउटा अति महत्त्वपूर्ण सत्यता सिकाउन प्रयोग गर्नुभयो। यस बेईमान स्त्रीको नाम गो_______ थियो (हेशे १:३)। यस स्त्रीले अरू मानिसहरूलाई प्रेम गरी र तिनीहरूको निम्ति होशेलाई छोडिदिई। निश्चय नै, यस घटनाले होशेलाई एउटा हृदय तोडिएको मानिस बनायो। उसको ठूलो पापको बाबजुद पनि होशेले गोमेरलाई प्रेम गरे, र होशे ३ अध्यायमा होशेले गोमेरलाई फिर्ता आफैकहाँ ल्याएको र उसलाई यसो भनेको सिक्न सक्छौं, “अनि तिमी अर्को मानिसको नहुनु! तब _____ पनि ________ प्रति यस्तै रहनेछु” (होशे ३:३)।
के तपाईंले सन्देश बुझ्नुभयो?
परमेश्वरले होशेको विवाह एउटा अति महत्त्वपूर्ण कुराको चित्रण भएको चाहनुभयो। सन्देश यो थियो: गोमेरले होशे प्रति व्यवहार गरेझैं इस्राएलले पनि परमेश्वर प्रति त्यस्तै व्यवहार गर्यो! होशेको व्यक्तिगत विवाह इस्राएलसँग परमेश्वरको सम्बन्धको एउटा तस्विर बन्यो। होशेले परमप्रभुको चित्रण गरे र गोमेरले पापमय जातिको चित्रण गरिन्।
इस्राएल परमप्रभुको दुलही भएकी थिई। परमप्रभुसँग इस्राएलको बहुमूल्य सम्बन्ध थियो। परमप्रभुले आफ्नो नामको महिमा उसलाई सुम्पिनुभएको थियो। परमप्रभुले उसलाई आफ्नो अगम्य प्रेमले अंगाल्नुभयो। तर इस्राएलले के गर्यो? त्यो जातिले आत्मिक व्यभिचार गर्यो र परमप्रभु प्रति बेईमान भयो। इस्राएल एकमात्र, सत्य परमेश्वरबाट फर्कियो र अरू देवताहरू पुज्न थाल्यो। होशे अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई आफैंकहाँ फर्काउन खोज्नुभयो।
यस समयकालमा इस्राएलको राजा यारोबाम दोस्रो थिए। तिनले परमेश्वरको नजरमा ठीक गरे की खराब गरे (२ राजा १४:२३-२४)? ______________________________ तिनको राज्यको प्रजाले तिनकै नमुनालाई पछ्याए! त्यो राष्ट्र परमप्रभुबाट फर्किएको थियो।
तीन महान् सत्यताहरू
होशेको पुस्तकले हामीलाई परमेश्वरको बारेमा तीन महान् सत्यताहरूको सम्झना गराउँदछ:
१)परमेश्वरका प्रजाहरू उहाँप्रति विश्वासयोग्य नहुँदा उहाँ शोकित बन्नुहुन्छ। परमेश्वरका प्रजाहरू विश्वासययोग्य नभएर अरू देवताहरूको पछि लाग्दा परमेश्वरलाई कस्तो अनुभव भयो होला? होशे जस्तो बेईमान श्रीमती भएको कुनै मानिसलाई प्रश्न गर्नुहोस्! होशेको सन्देश सोझै उसको हृदयबाट आयो। उनले अनुभव गरेको हृदयविदारक अवस्था परमेश्वरको तोडिएको हृदयको तस्विर थियो। उहाँको प्रजाहरूले त्याग्दा परमेश्वर कहिल्यै पनि आनन्दित बन्न सक्नुहुँदैन। यहुदा राज्यको निम्ति यशैया तोडिएको हृदय भएको अगमवक्ता थिए (अध्याय ९ हेर्नुहोस्)। इस्राएल राज्यको निम्ति होशे तोडिएको हृदय भएको अगमवक्ता थिए। जसरी लूकाले उडाउ पुत्रको कथा प्रस्तुत गर्दछन् (लूका १५), उसरी नै होशेले उडाउ श्रीमतीको कथा प्रस्तुत गर्दछन्। यी दुवै कथाहरूले हामीलाई परमेश्वरको हृदयको बारेमा धेरै कुराहरू प्रकट गर्दछन्!
२)परमेश्वरले जहिल्यै पनि पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले कहिल्यै पनि पापलाई बेवास्ता गर्न र नदेखेजस्तो गर्न सक्नुहुँदैन। पाप जहिल्यै पनि परमेश्वरको निम्ति साह्रै गम्भीर करा हो। आज पनि परमेश्वर तर्फ विश्वासयोग्य नहुनु भनेको साह्रै गम्भीर पाप हो (याकुब ४:४ पढ्नुहोस्)। जब विश्वसीले “पहिलो प्रेम” छोड्दछ (प्रकाश २:४) अनि संसार र सुखबिलास वा परमेश्वरभन्दा भढी कुनै पनि थोकलाई प्रेम गर्न थाल्दछ, तब “आत्मिक व्यभिचार” (याकूब ४:४)ले स्थान पाउँछ।
३)परमेश्वरले उहाँका आफ्नाहरूलाई कहिल्यै पनि प्रेम गर्न छाड्नुहुँदैन। परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ तर उहाँले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामीले होशेको पुस्तकमा परमेश्वरका पापी र अविश्वासयोग्य प्रजाहरूको निम्ति समेत, उहाँले गहिरो प्रेमको राख्नुभएको बारेमा सिक्नसक्छौं। उहाँका आफ्नालाई उहाँले अटुट प्रेम गर्नुहुन्छ! निम्त पदहरूलाई हेर्नुहोस् र परमेश्वरको आफ्ना प्रजाहरूको निम्ति उहाँको प्रेमलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ कि भनी हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्: होशे २:१४-१५; होशे ६:१-३; होशे ११:१-४; होशे१४:४-८।
उहाँ अटुट प्रेमको परमेश्वर हुनुभएको हुनाले, उहाँले आफूलाई त्यागेकाहरूलाई फेरी जित्न खोज्नुहुन्छ। ऊ पापी र बेईमान स्त्री भए तापनि, होशेले तिनको श्रीमती गोमेरलाई फिर्ता लिएर आए (होशे ३:१-३)। परमेश्वरले इस्राएल राष्ट्रलाई पनि त्यस्तै गर्नुभयो। होशेको पुस्तकमा चाबी शब्दहरू मध्ये एउटा चाहिँ “फर्क” भन्ने शब्द हो (यो पुस्तकमा उक्त शब्द १५ पटक पाइन्छ)। चाबी पद होशे १४:१ हो: “हे इस्राएल, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरकहाँ _______!” होशे ६:१-२ मा पनि पढ्नुहोस्। पापीहरूको निम्ति त्यहाँ आशा छ! विश्वासयोग्यता नभएको मानिसहरूको निम्ति आशा छ! परमेश्वरबाट टाढामा भएका मानिसहरूको निम्ति आशा छ! त्यस प्रकारका मानिसहरूका निम्ति परमेश्वरको सरल सन्देश छ: फर्क!
तपाईंको आफ्नै जीवनको बारेमा बिचार गर्नुहोस्। के तपाईं परमेश्वरको नजिकमा हुनुहुन्छ कि कतै पर बगीसक्नुभयो? के तपाईं परमेश्वरबाट अन्तै फर्किनुभएको छ?
तपाईं एउटा कठघरको छेऊमा कुनै डुङ्गामा हुनुहुन्छ (तर कठघरमा त्यो डुङ्गा बाँधिएको भने छैन) भनी आफ्नै बारेमा एकपटक कल्पना गर्नुहोस् । तपाईं त्यहाँ सुन्दर दृश्यमा आनन्दित हुँदै बसीरहनुभएको छ, डुङ्गा बिस्तारै बहन थाल्छ। एक घण्टा बितेपछि तपाईं त्यो कठघरभन्दा कति टाढामा पुगिसक्नुभयो भन्ने कुरामा अचम्मित पर्न थाल्नुहुन्छ: “हामी कति नजिकमा थियौं; हामी कसरी यती ठूलो दुरीमा अलग भयौं?” अँ, को सरेको हो, तपाईं कि कठघर? ___________ यदि तपाईं हुनुपर्ने जति परमेश्वरको नजिकमा हुनुहुँदैन भने, बिचार गर्नुहोस्, को सरेको हो? समस्याको समाधानको निम्ति, याकूब ४:८ पढ्नुहोस्! परमेश्वरको वचन (जस्तै यूहन्ना ३:१६मा पाइने मुक्तिको प्रतिज्ञा) कहिल्यै हल्लिँदैन र कहिल्यै बदल्दैन। आजको दश वर्षपछि परमेश्वरको वचनले ठीक त्यहि नै भन्नेछ! यदि यूहन्ना ३:१६लाई विश्वास गर्न हामीले इन्कार गर्यौं भने त्यो हाम्रो गल्ती हो, परमेश्वरको होइन! उहाँ सर्नुहुँदैन, हामी सर्छौं! (एउटा मिल्दोजुल्दो उदाहरण: श्रीमान र श्रीमती गाडी गुडाउँदै यात्रा गरिरहेका थिए। उनीहरूले विवाह गरेको १० वर्ष भइसक्यो। श्रीमान गाडी गुडाइरहनुभएको थियो; श्रीमती अर्को पट्टी झ्याल छेऊको सीटमा बसिरहेकी थिइन्। श्रीमतीले भनिन्, “प्रिय, के तपाईंलाई सम्झना छ हामीले विवाह गरेको पहिला दिनहरूमा गाडीमा यात्रा गरेको समयहरू? हामीहरू यति नजिक सँगै बसिरहेका थियौं कि हाम्रो गाडी पछाडीको चालकले सायद गाडीमा एकै जनामात्र मान्छे छ भन्ने सोचेको थियो होला। अहिले के भयो?” श्रीमानले जवाफ दिनुभयो: “प्यारी, म त सरेको छुइन”।)
होशेको पुस्तकको अर्को चाबी पद अन्तिम खण्डमा पाइन्छ (१४:९): “बुद्धिमान को छ, जसले यी कुराहरू बुझ्छ? समझदार को च, जसले यी कुराहरू जान्दछ? किनकि परमप्रभुका मार्गहरू __________ छन्, र धर्मी जनहरू तिनमा हिँड्नेछन्; तर अपराधीहरू तिनमै ________ __________ लड्नेछन्”। यो पदलाई होशे १४:४ सँग तुलना गर्नुहोस्। परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले हाम्रो पछि हटाइहरूलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ (परमप्रभुबाट हाम्रो टाढा सराइलाई), तर हामीले परमप्रभुको मार्गहरूलाई चुन्नैपर्छ! परमेश्वरको मार्ग जहिल्यै पनि सर्वोत्तम मार्ग हो!
योएल अगमवक्ता सम्भवत: यहूदाका राजा योआशका दिनहरूमा जिएको हुनुपर्छ अध्याय ५ को चार्टलाई हेर्नुहोस्)। बाइबलले हामीलाई यी अगमवक्ताको बारेमा निकै थोरै मात्र जानकारी दिँदछ। हामीलाई तिनको बाबुको नामचाहिँ थाहा छ(योएल १:१)।
योएलको अगमवाणीले पलिस्तीहरूको देशमा आऐको सलहरहरूको भयानक महामारीको बारेमा बताउँदछ (योएल १:४)। सलहले गर्न सक्ने विनाश विश्वास गर्न झण्डै असम्भव हुन्छ। तिनीहरूले सबै बालीहरू र हरिया सागपातहरू जम्मै खाइदिन्छन्। १५ मिनटमा तिनीहरूको रूखका पातहरू सिद्ध्याउन सक्छन्। १९८९मा लाल समुद्र पार गरेका अनिकाले सलह(Desert Locust)को बथानले झण्डै २००० स्क्वायर माइल ढाकेको अनुमान गरिएको थियो। यस्तो बथानहरू कालो बादहलरू जस्ता हुन्छन् जो सूर्यलाई ढाक्नलाई पर्याप्त मात्रामा बाक्लो हुन्छन् र तीनमा दशौं लाख “फट्याङ्ग्राहरू” समावेश हुन्छन्। उहाँका प्रजाहरूको कारणले, परमेश्वरले ती प्राणीहरू इन्साफ स्वरुप पठाउनुभयो। सबै इन्साफहरूमा यी कुराहरू सत्य छन्, कारण चाहिँ पाप थियो र समाधान चाहिँ पश्चात्ताप (योएल २:१२-१४)!
त्यो भन्दा पनि ठूलो इन्साफ
परमेश्वरले भविष्यमा आउने अझै ठूलो इन्साफलाई औंल्याउन सलहको इन्साफको प्रयोग गर्नुभयो। यो भविष्यको इन्साफको घडीबारे योएलले बताउनु पर्ने थुप्रै कुरा थियो।
योएलको पुस्तकको चाबी वाक्यांश “परमप्रभुको दिन” हो। यो वाक्यांश १ अध्यायमा कहाँ भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? _______________ के यो वाक्यांशलाई २ अध्यायमा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? ___________________ ३ अध्यायमा? ________________ यो इन्साफको घडीको बारेमा योएलको पुस्तकले हमीलाई के बताउँछ?
परमप्रभुको दिनको बारेमा निम्न कुराहरू बताउने पदहरूसँग जोडा मिलाउनुहोस्। पदहरूलाई १ चोटी भन्दा अधिक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
१. _______ यस्तो समय पहिले कहिल्यै पनि भएको थिएन
२. _______ यो एउटा महान् र भयानक दिन हुनेछ।
३. _______ त्यो महान् दिन भन्दा अगाडी सूर्य अन्धकारमा बदली हुनेछ।
४. _______ यो अन्धकार र उदासीको दिन हुनेछ।
५._______ यो सर्वशक्तिमानबाट बिनाशको समय हुनेछ।
६. _______ यो बादलहरू र बाक्लो अन्धकारको दिन हुनेछ।
७. _______ यो यस्तो दिन हुनेछ जब भूमी काम्नेछ।
८. _______ परमप्रभु आफै “सियोनबाट गर्जनुहुनेछ” र व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुनुहुनेछ।
क. योएल १:१५
ख. योएल २:१
ग. योएल २:२
घ. योएल २:११
ङ. योएल २:३१
आज परमेश्वरले धेरै यस्ता कुराहरू हुन दिनुहुन्छ जुन कुराहरू उचित छैनन्। परमेश्वर सहनशील (रिसाउनु भन्दा धेरै अगाडीसम्म धीरजी) र पापी मानिसहरू प्रति धीरजवान हुनुहुन्छ। उहाँले हरेक पटक कुनै मानिसले पाप गर्दा वा झूट बोल्दा वा चोर्दा उसलाई तुरुन्तै इन्साफ गरिहाल्नुहुँदैन (उसलाई जहाँको-त्यहिँ नै मर्ने गरी हिर्काउनु अथवा उसलाई चट्ट्याङ्गद्वारा प्रहार गर्नु)। तर परमेश्वरले अहिलेको निम्ति खराब काम हुन दिनुहुँदैमा परमेश्वरले जहिल्यै पनि यस्तै गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। योएलको पुस्तकले हामीलाई सम्झना गराउँदछ कि भविष्यमा एउटा दिन आउँदैछ जब परमेश्वर मानिसहरूको मामला पाइला टेक्नुहुनेछ र यस संसार र यहाँ भएका मानिसहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा न्याय गर्नुहुनेछ। परमेश्वर पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ र उहाँले पापको इन्साफ गर्नैपर्छ!
पापीहरूको निम्ति योएलको सन्देश यही हो कि तिनीहरूले आफ्नो हृदय अब परमेश्वरसँग ठीक बनाउन तिनीहरूलाई खाँचो छ (योएल २:१२ तिमीहरू आफ्नो ___________ _________ मकहाँ फर्क)! योएल २:१३ चाबी पद हो: “आफ्ना वस्त्रहरू होइन, तर आफ्नो __________ च्यात, र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरकहाँ ________! किनभने उहाँ दयालु र अनुग्रहकारी, ____________ ढिलो र अनित करुणामय हुनुहुन्छ”। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरकहाँ फर्कने हरेक मानिसको निम्ति, योएलसँग शुभ समाचार छ (योएल २:१४; २:३२ पढ्नुहोस्)! हरेक मानिसले ऊ आफूले खराब समाचार वा शुभ समाचार, विनाश वा छुटकारामा कुन चाहन्छ भनी चुन्नुपर्छ। चुनाउ कुन हुनेछ?
अगमवक्ता आमोस टेकोअ शहरबाटका एक गो_______ थिए (आमोस १:१)। टेकोअ यरुशलेमबाट करिब १२ माइल दक्षिण तर्फ र बेतलेहेमबाट करिब ६ माइल दक्षिण तर्फ रहेको एउटा शहर वा गाउँ थियो। त्यसैले, आमोस एकजना झूत्रे गोठाला थिए जो यहूदाको दक्षिणी राज्यमा बसोबास गर्दथे। उनी, यहूदाको राजा उज्जियाह र इस्राएलको दुष्ट राजा यारोबाम दोस्रोका शासनकालमा जिएका थिए (आमोस १:१; अध्याय ५ को चार्ट हेर्नुहोस्)। त्यसैले आमोस यशैया र होशेको जीवनकालमा जिएका थिए।
उत्तरी राज्यमा मिस्सनरीको रूपमा पठाइएको
यद्यपि आमोस यहूदाको दक्षिणी राज्यमा बसोबास गर्दथे, परमेश्वरले उनलाई इस्राएलको उत्तरी राज्यमा पठाउनुभयो जहाँ उनी गएर आफ्नो सन्देश सुनाउने थिए। उनलाई बेथेलको शहरमा पठाइयो जुन चाहिँ उत्तरी राज्यको धार्मिक केन्द्र थियो। बेथेल मूर्तीपूजाको दुष्ट केन्द्र थियो।
बेथेलका मानिसहरूले आमोसको सेवाकाइलाई बढाई गरेनन् (आमोस ७:१०-१३)! वास्तवमा, बेथेलका पुजाहारीले आमोसलाई केही यस्ता कुराहरू भने: यहाँबाट निस्क र घर जाऊ (आमोस ७:१२) र हामीलाई अबदेखि उसो परमेश्वरको सन्देश नसुनाऊ (आमोस ७:१३)!
धर्मि परमेश्वरले पापको दण्ड दिनै पर्छ
होशेले आमोसले गरेकै समयमा उत्तरी राज्यमा सेवाकाइ गरे भनी हामीले पहिल्यै सिकिसकेका छौं। होशे र आमोस दुवैले ती मानिसहरूलाई परमेश्वरको सन्देश बताए जसले परमेश्वरलाई त्यागेका थिए। आमोसले सामर्थ्यसँग मानिसहरूको पापलाई औंल्याए र धर्मि परमेश्वरले पापको दण्ड दिनैपर्छ भनी बताए। होशेले पनि, तिनीहरूको पापको बारेमा बताए, तर तिनले उनीहरूलाई परमेश्वरको हृदयको प्रेम र परमेश्वरकहाँ फर्कनुपर्ने उनीहरूको आवश्यकताको बारेमा पनि बताए। त्यसैले, होशेले परमेश्वरको अटुट प्रेमको बारेमा बताए र आमोसले परमेश्वरको नबाङ्गिने धार्मिकताको बारेमा बताए!
आमोसको पुस्तकको चाबी पद आमोस ३:२मा पाइन्छ: “म तिमीहरूलाई तिनीहरूका सबै _____________ _____________ दिनेछु”। धर्मि परमेश्वरले पापलाई नदेखेजस्तो गर्न वा पापलाई बेवास्ता गर्न वा पापलाई घटबढ गर्न सक्नुहुँदैन! धर्मि परमेश्वरले पापको इन्साफ गर्नै पर्छ! यही कारणले परमेश्वरले आमोसद्वारा बोल्नुभयो र उहाँका पापपूर्ण प्रजालाई भन्नुभयो: “हे इस्राएल, आफ्नो _____________ ____________ तयार होऊ!” (आमोस ४:१२)।
आमोसको दिनहरूको उत्तरी राज्य कस्तो थियो? यारोबाम दोस्रो सिंहासनमा बसिरहेको दुष्ट राजा थियो। तिनले कति वर्ष राज्य गरे (२ राजा १४:२३)? _________ यो निकै लामो शासनकाल थियो, र त्यस वर्षहरूको समयावधिमा उत्तरी राज्यको मानिसहरू ठूलो समृद्धिमा रमाए। तिनीहरूसँग सम्पत्ती र आनन्द र सुरक्षा थियो। चिन्ता गर्नुपर्ने विशाल युद्धहरू त्यहाँ थिएनन्। बाहिरबाट हेर्दा सबै कुराहरू सुन्दर र राम्रो देखिन्थ्यो, तर समस्याचाहिँ भित्र थियो! मानिसहरूको हृदयमा समस्या थियो! मानिसहरू परमप्रभुबाट अन्तै फर्केका थिए अनि पाप र मूर्तिपूजामा जिइरहेका थिए। सबै कुराहरू राम्रै र असलै चलिरहेको छ भनी तिनीहरू सोच्दथे, तर कहिँबाट आमोस आउँछन् र सबै कुराहरू भयानक छन् अनि समस्या र इन्साफ आउँदैछ भनी तिनीहरूलाई बताइदिए!
वर्तमान उजाड छ तर भविष्य उज्यालो छ
गोठालो आमोस केवल निराशाको अगमवक्ता थिएनन्! तिनीसँग आशाको सन्देश पनि थियो, जुन चाहिँ विशेषगरी यस पुस्तकको अन्तिम पदहरूमा देखिन्छ (आमोस९:११-१५)। यो खण्डले सिकाउँछ कि इस्राएलको भविष्यको राजा दाऊदको वंशबाट आउनुहुनेछ (११ पद), इस्राएल सबै राष्ट्रहरूमा सर्वोच्च हुनेछ (१२ पद), भूमी फलवान हुनेछ (१३ पद), शहरहरू पुनर्निमाण हुनेछन् (१४ पद) र राष्ट्र सदाको निम्ति उसको आफ्नै भूमीमा स्थापित हुनेछ (१५ पद)। यी उदेकका प्रतिज्ञाहरू ख्रीष्ट यस संसारमा राजाको रूपमा फर्केर आउनुभए पछि पुरा हुनेछन्! आमोसको सन्देश: दुरुपयोग गरिएका विशेषाधिकारहरूले भरपूर दण्ड ल्याउँछ!
पुरानो नियमको सबैभन्दा छोटो पुस्तक ओबद्याह हो: केवल २१ पदहरू! बाइबलले हामीलाई अगमवक्ता ओबद्याहको बारेमा निकै थोरै मात्र बताएको छ। तिनको नामक अर्थ “परमप्रभुको दास” हो र परमप्रभुले उहाँको दास ओबद्याहलाई हामीलाई महत्त्वपूर्ण सन्देश भएको यो सानो पुस्तक दिन प्रयोग गर्नुभयो। जब तपाईंले ओबद्याहको पुस्तको बारेमा सोच्नुहुन्छ, जहिले पनि एउटा शब्द बिचार गर्नुहोस: एदोम। पहिलो पदले भन्दछ, “ओबद्याहको दर्शन— _________को विषयमा प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ”। यो सानो पुस्तक एउटा थोकको बारेमा हो, अर्थात एदोममाथि परमेश्वरक इन्साफ! एदोम के थियो? एदोम मानिसहरूको एउटा जाति थियो। ती मानिसहरू एसावका वंशहरू हुन्। एसाव याकूबका दाजु थिए। उत्पत्ति २५:३० मा एसावलाई _________ (जसको अर्थ हो “रातो”) पनि भनिएको हामी सिक्न सक्छौं। एसाव र याकूब जम्ल्याह थिए। एसाव जेठो थियो (तिनी पहिले बाहिर निस्के) र याकूब कान्छो थियो (तिनी दोस्रोमा बाहिर निस्के)। उत्पत्ति २५:२३ अनुसार परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि जेठाले (यिनी को थिए? __________) कान्छाको (यिनी को थिए? ___________) सेवा गर्नेछ। हामीले यो पनि सिक्यौं कि एसावलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्ध भन्दा सुरुवाको बढी वास्ता थियो (उत्पत्ति २५:२९-३४; हिब्रू १२:१६)। एसावको वंशहरूको बारेमा पनि यही कुरा भन्न सकिन्छ। एदोमीहरूले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने सवालमा खासै वास्ता गरेनन्। वास्तवमा, सताब्दीयऔ पछि पनि तिनीहरू परमेश्वरका प्रजा इस्राएलको शत्रुहरू थिए! एदोम जातिको सबैभन्दा ठूलो पाप भनेको घमण्ड थियो: “तेरो हृदयको __________ तँलाई ____________ दिएको छ” (ओबद्याह १:३)। यो बुझ्नलाई हामीले यी मानिसहरू बसोबास गरेका शहरको बारेमा केही कुरा बुझ्नु खाँचो पर्छ। एदोमको राजधानी सेला शहर थियो (पछि पेट्रा भनिएको), जुन मृत सागरको दक्षिण तर्फ अवस्थित थियो। यो शहर चुचुराको टुप्पामा थियो र माथि शहर जाने बाटो एउटा साँघुरो खोंचबाट भएर जानुपर्ने थियो। यो साँघुरो प्रवेशद्वारको कारण र शहरमा अरू कुनै मार्ग भएर जान असम्भव भएको हुनाले विशाल सेनाबाट शहरको रक्षा गर्नलाई हातमा गन्न मिल्ने सिपाही मात्र भए पुग्थ्यो! यी मानिसहरू निकै सुरक्षित र कुशल महसुस गर्दथे! कुनै पनि शत्रुले कुनै पनि समयमा जित्न असम्भव छ भनी उनीहरू सोच्दथे! तिनीहरूको “उच्च शहर”को वासस्थान “_________ धाँदाहरू”मा थियो (ओबद्याह १:३) र कसैले पनि कुनै समयमा उनीहरूमाथि विजयी हुन वा उनीहरूलाई तल झार्न सक्दछ भनी उनीहरू सोच्दैनथे! तिनीहरू अजेय छन् भनी तिनीहरू सोच्दथे! आज यदि तपाईं पेट्रा शहरमा घुम्न जानुहुन्छ भने तपाईंले तो उच्च शहरका भग्नावशेषहरू भेट्टाउनुहुनेछ। त्यहाँ कुनै पनि एदोमीहरू नबसेको तपाईंले भेट्टाउनुहुनेछ! उनीहरूको विनाश भएको निकै समय भइसक्यो! कुनै पनि मानिसले उनीहरूलाई तल झार्न सक्दैन भनी उनीहरूले सोच्दथे, तर परमेश्वरले सक्नुहुन्थ्यो! “तैंले आफूलाई _______ जस्तै माथि-माथि पुर्याइस भने पनि, र तैले आफ्नो गुँड __________ बीचमा बनाइस् भने पनि म तँलाई त्यहाँबाट __________ _________, ___________ भन्नुहुन्छ” (ओबद्याह ४)। परमेश्वरले यी मानिसहरूको इन्साफ गर्नुभएको कारणहरूमध्ये एउटाचाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरको प्रजालाई गरेको व्यवहार हो (१०-१४ पदहरू)। यी पदहरूले हामीलाई देखाउँदछ कि एदोम इस्राएल प्रति विपक्षी र निर्दयी थियो। धेरै समय अगाडी परमेश्वरले यो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त दिनुभएको थियो “अनि जसले तिमीलाई आशीर्वाद दिनेछन्, तिनीहरूलाई म आशिष दिनेछु, र जसले तिमीलाई श्राप दिनेछन्, त्यसलाई म __________ दिनेछु” (उत्पत्ति १२:३)। एदोमीहरूले इस्राएललाई श्राप दिए र फलस्वरुप तिनीहरूले आफैलाई परमेश्वरबाट श्रापित भएको भेट्टाए। ओबद्याहको पुस्तकले विश्वासीहरूलाई घमण्डको पापको खतराबारे चेतावनी दिनुपर्छ। हामीले ख्रीष्टियान जीवनमा राम्रै गरौंला र हामी कहिल्यै पनि विफल हुनेछैनौं भन्दै हामीले हाम्रा आँखाहरू परमप्रभुबाट अन्तै लैजाउँला! तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ, “यसकारण जसले, म ________ छु भनी सम्झन्छ, त्यो होसियार रहोस् (होश पुर्याओस्!) नत्र त्यो ________” (१ कोरिन्थी १०:१२)। परमेश्वरमा भरोसा राख, उहाँले छुटकारा दिन र मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ (ओबद्याह २१ पद—चाबी पद)। एदोमीहरूबाट अध्याय सिकौं! जो शरीरबाटको हो, ऊ विफल हुनेछ र लड्नेछ!
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 14:41:122020-04-28 14:35:01होशे, योएल, आमोस, ओबदियाह
इजकिएल र दानियल योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन�...